Heer Kulka Sare Ee Cimiladu Ma Yahay Mid Dili Kara Corona-vires | Marsa News
Heer Kulka Sare Ee Cimiladu Ma Yahay Mid Dili Kara Corona-vires
March 25, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Dadka qaar waxay rajo ka qabaan in cudurka coronavirus uu wiiqmayo marka uu heerkulka cimilada sare usii kaco, laakiin cudurrada safmarka ah uma dhaqmaan sida cudurrada xilliyada sanadka qaar dillaaca.
Cudurro badan oo ah kuwa faafa waxay ku waqtiyeysan yihiin xilliyada kala duwan ee cimilada sanadka.
Hargabka wuxuu sida caadiga ah imaadaa bilaha lagu jiro xagaaga ee ay qaboobaha jiraan. Cudurrada kale, sida tiifowga waxay iyaguna kacaan xilliga kuleylaha.
Dadka ay ku dhacdo jadeecada ayaa sidoo kale yaraada marka lagu jiro kuleylaha, halka gobollada dhul-baraha ku hareereysanna ay jadeecada saameynteeda badato xilliyada ay abaarta jirto.
Sidaas awgeed waxaan layaab lahayn in dadka qaar ay hadda isweydiinayaan in cudurka Covid-19 uu isaguna yahay mid xilli gaar ah awood leh.
Tan iyo markii kiiskii ugu horreeyay looga dhawaaqay dalka Shiinaha bartamihii bishii December, fayraskan wuxuu u fiday si deg deg ah, tirada dadka uu ku dhacayana waxay hadda si aad ah ugu badan yihiin dalalka Qaaradda Yurub iyo dalka Mareykanka.
Image captionWaxaa jirta rajo ku sabasan in marka uu heer kulka diirrimaad noqdo ay yaraanayaan dadka uu ku dhacayo coronavirus
Inta badan waddamada uu saameynta ugu weyn ku yeeshay waxay ku jiraan xilliyada ugu qabow, taasoo sababtay in ay dhalato hadalheynta ku saabsan in cudurkan uu wiiqmi doono marka ay cililada kululaato.
Haseyeeshee khubaro badan ayaa ka digaya inaan aad la isugu halleynin rajada ku aaddan in coronavirus uu ku dhiman doono kuleylaha.
Way ku saxan yihiin inay arrintaas ka digaan. Fayraska sababa Covid-19 – oo si rasmi ah loogu magacaabay SARS-CoV-2 – waa mid cusub oo aan wali laga heynin xog muujineysa inuu isku baddali karo xilli sanadeedka.
Fayraska aadka ugu eg Covid-19 ee loo yaqaanno Sars wuxuu dunida ku fiday sanadkii 2003-dii, si deg deg ah ayaana loo joojiyay, taasoo micnaheedu yahay inay yartahay xogta laga ogyahay inuu ku xirnaa xilliyada kala duwan ee cimilada sanadka.
Image captionCilmi baaris la sameeyay ayaa lagu sheegay in Covid-19 ay awooddiisa yaraan doonto marka ay cimilada kululaato ama ay huur noqoto
Daraasad soo baxday 10 sano ka hor, oo ay sameysay Kate Templeton, oo ka tirsan Xarunta Cudurrada Faafa ee Jaamacadda Edinburgh, UK, ayaa lagu ogaaday in saddex nooc oo ka mid ah xanuunnada kale ee ka dhasha coronavirus “la arkay xilliga xagaaga ee qabowga uu jiro”.
Fayrasyadan waxay u muuqdeen inay xoog lahaayeen, oo ay faafayeen inta u dhaxeysa bilaha December ilaa April.
Waxaa sidaasoo kale ah Fayras lagu magacaabo influenza, oo isagana ka dhasha coronavirus, balse inta badan ku dhaca dadka uu difaaca jirkooda liito.
Waxaa jirta xog kooban oo sarbeebeysa in Covid-19 uu isaguna kala duwanaan karo xilliyada cimilada sanadka. Laakiin fiditaanka baaxadda leh cudurkan cusub uu ku gaarayo caalamka ayaa u muuqda mid ay isku mid u yihiin qaboobaha iyo kuleylaha labadaba.
Cilmi baaris aan wali la daabicin oo la isku barbardhigayo cimilada ilaa 500 oo goobood oo caalamka ka mid ah, oo uu gaaray Covid-19, ayaa muujineysa inuu xiro xiriir ka dhaxeeya fiditaanka Fayraska iyo heerkulka, xawaaraha hawada iyo huurka.
Image captionWaxaa jira daraasado yar oo lagu eegay saameynta ay cimilada ku yeelan karto Covid-19
Daraasad kale oo aan la daabicin ayaa sidoo kale bidhaamisay in heerkulka sare uu xiriir la leeyahay hoos u dhaca Covid-19, laakiin waxaa daraasaddan lagu caddeeyay in heerkulka kaliya aan loo eegi karin kala duwanaanshaha saameynta cudurkan ee adduunka.
isla sidaasoo kale, daraasad aan iyadana wali la daabicin ayaa saadaalisay in dalalka ay cimiladoodu dhexdhexaadka tahay iyo kuwa qabow ay halista ugu weyn ugu jiraan saameynta Covid-19. Waxaa kusoo xiga Gobollada qallalan. Dalalka u dhow dhul-baraha ee caalamka ayaa lagu tilmaamay kuwa ay saameynta ugu yar gaari karto, sida ay cilmi baareyaasha sheegeen.
Hase yeeshee waxa hubaasha loo ogyahay waa in cudurrada safmarka ah aysan ku hakanin cimilada noocyadeeda kala duwan.